ConvertMore: Manova fitsidihana tranokala bebe kokoa miaraka amin'ity Widget Callback an-telefaona ity | Martech Zone
Rehefa mijery ny famakafakana ny tranokalanao ianao, ny zavatra iray tadiavinao foana dia ny mampitombo ny fiovam-pon'ny mpitsidika. Ny votoaty sy ny traikefan'ny mpampiasa lehibe dia afaka mitarika ny firotsahana amin'ny tranokala iray, saingy tsy voatery mamehy ny elanelana misy eo amin'ny fifampiraharahana sy ny tena mitondra ny fiovam-po izany. Rehefa te hifandray manokana aminao ny olona, ​​azonao atao ve izy ireo?
Manana mpanjifa roa izahay izao dia mametraka widgets alimanaka mandeha ho azy izay ahafahan'ny mpitsidika manompo tena sy mamorona ny fotoanany manokana amin'ny Internet rehefa tsy te hiresaka amin'olona avy hatrany izy ireo. Ahoana anefa raha te hifandray aminao avy hatrany izy ireo? Ankoatra ny widgets amin'ny chat, ny safidy iray azonao andramana dia widget callback.
ConvertMore manolotra vahaolana tsotra amin'ny famoronana pop-up callback amin'ny tranokalanao. amin'ny ConvertMore afaka mamorona ianao:
Popup ara-potoana – mametraha popup voafaritra hiseho rehefa avy nandany fotoana maromaro tao amin'ny pejinao ny mpampiasa iray. Azonao atao ny mametraka mialoha ny fameram-potoana mba hahafahanao misambotra ny mpanjifanao mandritra ny segondra vitsy voalohany ao amin'ny tranokala, alohan'ny hanilihana azy ireo ka hiala amin'ny tranokalanao.
Hivoaka ny Popup – Mipoitra ny Exit Popup rehefa ny rafitra fanaraha-maso an'ny ConvertMore, dia manara-maso ny totozin'ny mpampiasa anao mivezivezy eo amin'ny bokotra fivoahana amin'ny pejinao. Azonao atao ny mametraka tolotra manokana ho an'ny mpanjifanao mba hanovan'izy ireo ny heviny sy hiantso anao fa tsy handao ny tranokalanao.
bokotra mitsingevana – Mitsinkafona eo amin'ny faran'ny fitaovan'ny mpampiasa ity bokotra ity rehefa mijery ny tranokalanao izy ireo. Satria mihoatra ny 55% amin'ny fanontaniana an-tserasera no avy amin'ireo mpampiasa finday, izany dia hanome azy ireo safidy hiantso anao mora foana mandritra ny fotoanan'izy ireo mijery ny tranokalanao.
Ny ConvertMore dia manana vidiny mivaingana izay tsy andoavanao afa-tsy rehefa misy antso, ny widgets dia mifanaraka tanteraka amin'ny marikao, ary manana dashboard feno ianao hanaraha-maso ny tahan'ny fiovam-pon'ny antsonao.
Mianara bebe kokoa amin'ny ConvertMore
Tags: fiovam-po antsodashboard fiovam-po antsowidget callbacktsindrio-to-antsoconvertmorefivoahana ny fikasanamandoa isaky ny fitarihanaWidget antso an-telefaonapop-time